Ukulanda kusebenze, inhloli ye-WhatsApp | Kusuka kuLinux
Ukhathele ukungakwazi ukubheka ukuthi ngabe umuntu uziba eyakho Imilayezo ye-WhatsApp? Njengoba uhlelo lwenza ukuthi imikhaza eluhlaza okwesibhakabhaka isebenze, sekuyinto ejwayelekile ukwazi ukuthi uma othile evula umyalezo wakho. Noma kunjalo, ngenxa yokugxekwa okutholwe yinkampani ngenxa yemfihlo eyayihilelekile, banquma ukuthi lokhu kungagwemeka.
Ukulanda kusebenze, inhloli ye-WhatsApp por ukhaphethi
Ngalesi sizathu, abantu abaningi bawenze wangasebenzi lo msebenzi, ngaleyo ndlela bavimba lolu lwazi ukuthi lungatholakali kwabanye abantu.
I-Intanethi ayimanga ndawonye, ​​sekuvele kunesicelo senhloli se- WhatsApp okwenza kube lula ukunika amandla lo msebenzi noma ngabe abanye bawenze wangasebenzi. Ubizwa ngegama Usebenze, inhloli ye-WhatsApp.
Kuyithuluzi lokuphatha oxhumana nabo futhi uthole izaziso lapho oxhumana naye ekhona online noma okungaxhunyiwe, ngakho-ke ukususa isikhathi sokugcina sokuxhumana akusizi ngalutho, futhi kukhombisa ukuxhumana kokugcina kwalowo msebenzisi othile.
Ngezansi, sinikeze uhlu lokusetshenziswa kohlelo lokusebenza Usebenze, inhloli ye-WhatsApp.
- Izaziso zomsindo lapho oxhumana naye exhuma noma enqamula.
- Ikubonisa isikhathi sokugcina sokuxhumana sabo bonke oxhumana nabo futhi ungakwazi nika amandla noma khubaza lnjengezaziso zomuntu ngamunye.
- Ungathola isaziso lapho umsebenzisi eguqula isithombe sakhe sephrofayili.
- Kungenzeka futhi ukuthola izaziso lapho umuntu othize eshintsha isimo sakhe.
- Kudinga ukubhalisa nenethiwekhi yokuxhumana yenjini yokusesha ebaluleke kakhulu emhlabeni, I-Google +.
- Uzodinga ukuxhumana ku internet ukwazi ukusebenzisa i- uhlelo lokusebenza.
- Futhi udinga ukwenza ukuthi idivayisi inganqamuki, ukuze ukwazi ukuthola izaziso.
Ngalokhu, ungabona ukuthi akuyona yonke into elahlekile ukuze uthole ulwazi mayelana nokusetshenziswa abakunikeza uhlelo lokusebenza lwemiyalezo esheshayo, ngenxa Inhloli yeWhatsApp, Isebenzile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Ukulanda kusebenze, inhloli ye-WhatsApp
UDayane Qu kusho
Ubani onengqondo yabo efanele, umsebenzisi we-blog noma cha, umsebenzisi we-GNU / Linux noma cha, ongasebenzisa iWhatsfuck. I-Facebook nezinkampani zayo zingumshini wobunhloli emhlabeni wonke ononya. Ngiyakucela ukuthi ufunde le ndatshana ngeso elibucayi bese wenza ucwaningo lwakho. Izisekelo zamahhala, izinsiza "ze-inthanethi yamahhala" ezinikezwa yisiwula sikaZuckerberg, ziyizinhlobo zobunhloli ezinkulu inkampani yakhe ne-NSA abazenzele zona, befuna ukwenza buthaka imigoqo ye-cryptographic kanye nezokuphepha futhi benqabe ukusetshenziswa kwamathuluzi avikela umsebenzisi nobumfihlo babo.
I-athikili embi IMHO, zama kanzima entweni ekhiqizayo.
Phendula uDayane Qu
Isicelo esihle kakhulu, maqondana namazwana angenhla, kufanele ubeke eceleni i-paranoia. Yize kuliqiniso, kunezifundo ezibonisa ukuthi kufanele uchithe izigidigidi zamahora ukuhlola wonke umuntu. Ngakho-ke ungakholelwa enkabeni yendawo yonke. Uma kungenjalo lokho kushiyelwe abantu abadume ngempela, akunjalo? Ukubingelela ne-athikili enhle
Kuhle kakhulu, namhlanje kufanele sibazi bonke lobu buchwepheshe, ngolunye usuku singabudinga, ngamunye wethu uzokwazi ukuthi kungani nokuthi yini, kepha kuhle ukwazi ukuthi bukhona.
Ewpero 1 okungisebenzele
Isimemo kuFLISoL 2015 eCuba
IMicrosoft ikumema ukuthi ugubhe ukwethulwa kukaDebian Jessie